अनमोलको ‘पारस’ मा आग्या ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
अनमोलको ‘पारस’ मा आग्या ?
अभिनेता अनमोल केसीले डेब्यू चलचित्र ‘होस्टेल’ देखि ‘ए मेरो हजुर ३’ नयाँ अभिनेत्रीसँग काम गरेका छन् । ‘ए मेरो हजुर ४’ मा भने उनले पहिलो पटक एउटै अभिनेत्रीसँग दोहोर्‍याएर काम गरे । यो चलचित्रपछि ‘एन्टी हिरो’ मा अभिनेत्री जसिता गुरुङसँग रोमान्स गर्न लागेका उनले अर्को नयाँ चलचित्र ‘पारस’ मा नयाँ अभिनेत्री आग्या करनजीतसँग काम गर्न लागेको खबर बाहिरिएको छ ।
इन्स्टाग्राममा २० हजार फलोअर्स रहेकी आग्याको अनमोलसँग केमेस्ट्री सुहाउने देखिन्छ । उनले इन्स्टामा पोस्ट गरेका तस्विरहरु निकै सुन्दर छन् । उनका तस्विरहरुमा अनमोलले पनि कमेन्ट र रियाक्ट गर्ने गरेका छन् । अहिले आग्याले चलचित्रमा प्रवेश गर्न आफूलाई तयार बनाइरहेकी छन् । ‘लुट’ निर्माता माधव वाग्लेले निर्देशन गर्ने चलचित्रलाई अभिनेता भुवन केसीले निर्माण गर्नेछन् ।